“ရွာ၏ အထူးသတင်း ကြေငြာချက်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ရွာ၏ အထူးသတင်း ကြေငြာချက်´´
“ရွာ၏ အထူးသတင်း ကြေငြာချက်´´
Posted by ခင်ခ on Mar 8, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 33 comments
“ရွာ၏ အထူးသတင်း ကြေငြာချက်´´( ဆရာ ကိုဆာမိ ၊ ဆရာမ မနိုဗွီ တို့နောက်မှ လိုက်ပါခြင်းပါ။)
အခုမြန်စံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၁ နာရီရှိပါပြီ အထူး သတင်းများကို ကြေငြာပါမယ်။
“ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်ကြီး မင်္ဂလာပါ´´
သူကြီးမင်း၏ ရွာအ၀င် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ပေးမှု့အပေါ် ရွာလူကြီးအချို့ ကန်ကွက်မှု့ကြောင့် ပြန်ရုတ်သိမ်းခြင်း
ရွာထဲ၌ မီးလန့်မှု့ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း လူကြီးတစ်ယောက်အိမ်ဖြစ်၍ စောတီးဗျောမတီးဘဲ ပြီးသွားခြင်း
ရွာအတွင်း မီး လန့်မှု့နှင့်ပက်သက်၍ မနိုဗွီ၏ စီစဉ်မှု့ဖြင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခြင်း´´
ရွာထဲသို ယခင်ဝင်ရောက်လိုလျှင် ၀င်ခွင့်ဗီဇာ ( Log in ) ပြုပြီး သူကြီးမင်း မှ မန်းဘာ အဖြစ်လက်ခံမှသာ ရွာသို့ဝင်ထွက်ခွင့်ရိ်ှခဲ့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည် တစ်ပတ်ကျော်ကာလက ရွာတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လိုသူ မည်သူမဆို သူကြီးမင်းမှ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ပုံစံတွင် ပြည်စုံသည်ဖြစ်စေ မပြည့်စုံသည်ဖြစ်စေ ရွာပိုမိုးရှင်း တစ်ရပ်အနေနှင့် ထိုဆိုက်ရောက်ဗီဇာအား ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ရွာလူကြီးတစ်ချို့၏ ကန့်ကွက်ပြောဆိုမှု့ အသံများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ယခုအခါ ထိုဆိုက်ရောက်ဗီဇာအား သူကြီးမင်းမှ ဗီဒိုအာဏာဖြင့် ရုတ်သိမ်းထား ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မတ်လ ၅ ရက်နေ့ညသန်းကောင်ယံတွင် ရွာထဲရှိ သူကြီးအိမ်ဘက်မှ မီးလန့်မှု့တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိုမီးသည် ရွာ၏ သြဇာတိက္ကမ ရှိသူ လူကြီးတစ်ယောက်မှ နွေရောက်တော့မည်ဖြစ်သဖြင့် သတိပေးဇာတ်တိုက်ခြင်း မျှသာဖြစ်သဖြင့် တစ်စုံတရာအရေးယူခြင်း မရှိဘဲ ရွာသူရွာသားများ အထိန်တလန့် ဖြစ်မှု့ကို (sorry) စောတီး ဗျောမတီးဘဲ ပြီးစီးသွားခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရွာအနေနဲ့ အေးဆေးငြိမ်သက်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ထို ရွာ၌ အတွင်း မီး လန့်မှု့နှင့်ပက်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကို မနိုဗွီမှ ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ဟူသော ခေါင်းစဉ်နှင့် မတ်လ ၆ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွာသူရွာသားများ ဆွေးနွေး မေးမြန်းမှု့များကို ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အထက်ပါသတင်းများ၏ အသေးစိတ်အကျယ်ကို သိရှိလိုပါက အောက်ပါ သတင်းမှတ်တမ်းတွင် ကြည့်ရှု့လို ကြောင်းတင်ပြရင်း ဒီတစ်ပတ်၏ အထူးသတင်းကြေငြာမှု့ အားဒီမှာတင်ရပ်နားခွင့်ပြုပါ၊ သတင်းကြေငြာသူက ကျွန်တော် ခင်ခ ပါ။ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်များ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ´´
မီး လန့်မှု့သတင်း – http://myanmargazette.net/168996/society-lifestyle/aha-jokes
ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး သတင်း – http://myanmargazette.net/169030/creative-writing/short-story
( ခရက်တစ် – ဆရာ ကိုဆာမိ ၊ ဆရာမ မနိုဗွီ )
သဂျီးကြောင့် ရွာဆူတယ်ဗျာ…။ မှတ်လောက်သားလောက် ဖြစ်အောင် သူ့ကို ထိပ်တုံးခတ်ရင် ကောင်းမလား..။
ဦးကြောင်ကြီးရေ သူကြီးကို ထိပ်တုံးခတ်မယ်လို့သွားပြောရင် နှစ်လုံးပြူးကြီးနဲ့ လျှောက်ရမ်းနေမှာပေါ့။
အဲဒီကျ ကျွန်တော်တို့ ပွိုင့်တွေမျက်ခုံးလှုပ်နေပါ့မယ်ဗျ။
ဦးဆုံးကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးနော် ဦးကြောင်ကြီးရေ။
အေးဆေးငြိမ်သက်နေရင် နောက်တစ်မျိုးနဲ့ ထပ် ဆူ ကြတာပေါ့ကွယ်။
ဒီတစ်ခါ မီးမမွှေးဘဲ ရေနွေးဖြင့် ဆူစေတဲ့နည်း အကြံပြုသူ မခိုင်ဇာဟု မှတ်တမ်းမှတ်လိုက်မယ်နော်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် မေးရအုံးမယ် လဖက်ခြောက်က ရှမ်းပြည်ကလားဟင်!
ရွှေဖီ မိုးမလွတ်တလွတ် လက်ဖက်ခြောက်
လူကို ဆွဲချလိုက် ပြန်တင်လိုက်…….
စည်ကမ်းကို ပြင်ရေးလိုက် ဖင်ဆေးလိုက်……
ပီးတော့ မှာ ဗီတိုအာဏာသုံး…..
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဘာမန်း……… :harr:
ကိုတိမ်မည်းကလည်း သူကြီးလည်း မြန်မာနိုင်ငံရေးကို အတော်စိတ်ဝင်စားလေ့လာရင်းနဲ့
အဲလို တံခါးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် အကျင့်ကိုရသွားတာနေမှာပါ။
MG Announcer ကွ… မိုက်ဒလယ် လေးလေး…
ဒါမယ့် မီးကိစ္စကတော့ ရွာထဲအဆက်ပြတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စ ဆိုတော့… အခုမှ review ပြန်လုပ်နေပါတယ်လို့…
ကိုဆာမိချွန်လိုက်တဲ့ အရမ်းမီးသတ်ဗိုလ်ဖြစ်နေလို့ ရွာရဲ့ မီးသတင်းမို့ ကြေငြာပေးရတာဗျို့ မွန်မွန်ရေ။
ဆရာ ကိုဆာမိကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပိုစ့်ရေးဖို့ကုန်ကြမ်းတွေပေးလို့လေ။
အ ဟမ်း… အ ဟမ်း…
တဂျီးက ကောက်ရိုးပုံမီးရှို့တာ ရွာပါမီးကူးမှာစိုးလို့… ကာလသားခေါင်း မောင်ကျောက်က ညလည်သန်းခေါင် ကြက်ခိုးရာကပြန်လာရင်း သံချောင်းခေါက်လိုက်မိတာပါဗျာ… ဗွေမယူကြပါနဲ့…
စာကြွင်း။ ။တဂျီးနာမည်နဲ့ ဖောင်ဖြည့်ပြီး အိမ်ပေါက်စေ့ လိုက်ကြပ်မလို့… မကောင်းတတ်လို့…ဟင်းးးးးး
မိုးပြာများ မကြာမှီ ရွာထဲ ပြန်ဝင်လာမည် ဖြစ်သည်
လူတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်ကတော့ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘဲ သုံးသပ်တယ်။
ဆိုလိုတာက တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အကျင့် စရိုက် နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဆက်နွယ်မှု့ …. စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ဘာသာအယူအဆ အသားအရောင် ဆိုတာကို ကျွန်တော်က ထဲ့စဉ်စားလေ့ မရှိသလို
ဘာသာအယူအဆတွေကိုလည်း ငြင်းခုံလေ့မရှိဘူးဗျ ဆရာပေရေ။
ဗိုလ် ကျား သေနတ် ဆွဲ ကိုကြိုက်ရာကိုလုပ် ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားသလိုမျိုးဘဲ စိတ်ထဲထားတယ်လေ။
ဟယ် သတင်းကြေငြာတဲ့သူက တော်လိုက်တာ အန်ကယ်ကြီး သများ မင်လာဆောင်လို့ရင်လေ အန်ကယ်ကြီးကို မင်လာ သြဘာစာ ရွတ်တာလား ဘာလား သေချာပြောတတ်ဘူး အဲ့ဒီနေရာအတွက် တစ်ခါတည်း ဖိတ်ထားလိုက်ပြီနော် ခေါင်းပေါင်းတို့ တိုက်ပုံတို့ တစ်ခါတည်းကြိုဝယ်ထားလိုက်တော့ အခုသတို့သားလိုက်ရှာလိုက်အုံးမယ် သွားပြီဗျို့
ဟဲ့ ဟဲ့ မိဘုံ
ဟင်း ဟင်း ဟုတ်ပါ့ နင့်ဂိုလိုက်ရှာနေတာ
ဟိုနေ့က ချေးသွားတဲ့ ပိုက်ဆံ
သူကြီးကိုလဲ တစ်ရက်တော့ လက်ဝှေ့စင်ပေါ် ၀ိုင်းတင်ပေးလိုက်ကြရအောင်
ထိုဆိုက်ရောက်ဗီဇာအား သူကြီးမင်းမှ ဗီဒိုအာဏာဖြင့် ရုတ်သိမ်းထား ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဒီကိစ္စ ကိုခင်ခပြောမှ သတိထားမိတယ်ဗျို့…. :ha:
နိုဗွီကလည်း ကိုဆာမိသတင်းကို ခရက်တစ် ယူပြီး
ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး သတင်း တစ်ပုဒ်၇
ကိုခကလည်း (ခရက်တစ် – ဆရာ ကိုဆာမိ ၊ ဆရာမ မနိုဗွီ)ကနေ
ရွာ၏ အထူးသတင်း ကြေငြာချက် သတင်းတခုဖြစ်
ဝင်မန့်တဲ့ သူတွေလည်း ၁၀ ရ .. အဟိ
သဂျီးရဲ့ (Submit LONG Comment) ဆိုတာကြီးတော့ အားနာပါရဲ့
ခုမှသတိရတယ် အဲဒီနေ့က ကြက်သားကာလ သားချက်ကျွေးမယ်ပြောပြီး ရုတ်ရုတ်နဲ့ ကိုကျောက် လစ်သွားတာလေ။
သြဘာစာကို ဗြောင်းပြန်ဖတ်မိမှ မိပုံတစ်ယောက် အခက်တွေ့နေမယ်နော်။
ဒါကြောင့်လည်း သူကြီးကတော့ သူကြီးပါဘဲလေ။
အမှန်သတင်းတွေ ကြေငြာပေးတာပါ ကိုကြီးမိုက်ကလည်း။
တစ်ခါတလေကျ ဘာအကြောင်းရေးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်စားလိုက် ရွာထဲ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လမ်းသလားလိုက်နဲ့ မနိုဗွီရေ၊ မနိုတို့က ရှေ့ကသွားတော့ နောက်က လိုက်လိုက်တာလေ။
အဲလိုလည်း မဟုတ်ရပါဘူး Moe Z ရေ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ……. အဲလိုပါဘဲ။
သဂျီးက ဖွင့်ချင်သလိုဖွင့် ပိတ်ချင်သလိုပိတ်နဲ့
ဒီလို ရွာကို မီးလန့်ပေးလိုက်တော့
ရွာသူားတွေ နိုးနိုးကြားကြား ရှိကြတယ်ဆိုတာတော့ သိသွားတာပေါ့ဗျာ
တကယ်ဖြစ်မှ စမ်းသပ်တယ် ထင်နေမှာ စိုးရသေးသဗျ
တစ်လက်စတည်း တစ်ဆယ်လဲ ယူသွားသပေါ့ဗျာ
ရပ်ရွာစည်ပင်သာယာ ဖွံ့ဖျိုးဖို့အတွက် အဲ့ဂလို လုပ်ရပေတယ်လို့…………
သူကြီးအကြံပေး ပညာမဲ့အမတ်လေး မောင်မိုဘိုင်းထံမှာ အကြံဥာဏ်လေးဘာလေးတောင်းပါတော့လား….
ရွာကိုပိုမို၍ စည်ကားချင်သပဆိုရင် လွယ်လေ၏……..
အမှတ် ၁ မှတ်ကို ၀မ်းဒေါ်လှလို့သာ လုပ်ပေးလိုက်ပါလား………
ဂင်္ဂါမြစ်ရိုးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ သဲပွင့်တွေကိုသာ ရေတွက်လို့ရရင် ရလိမ့်မယ်……
မန်းဂေဇတ်မန်ဘာ အရေအတွက်ကိုတော့ဖြင့် ရေတွက်လို့ ရမှာမဟုက်ဘူး ဖစ်သွားလိမ့်မယ်…..
ရွာထဲမှာမီးလန့်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရွာသူရွာသားများကို ပြန်လည်တောင်းပန်သည့်အနေဖြင့်
မတ်ခ်ျလ ၃၂ ရက်နေ့မှာ မန်ဘာအားလုံးကို အမှတ် ၉၀၀၀၀ စီဖြည့်ပေးဖို့ သူကြီးမှ
စီစဉ်နေကြောင်း…. သူကြီးသမီးထံမှ သတင်းရရှိထားပါသည်………
အင်းးးးးး ဒါနဲ့ စကားအတင်းစပ်…….
ဒီ ကိုးလို့ကန့်လန့် (သူကြီးမင်း) ကို ဘက်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အများ ရေးကြ၊ ဖတ်ကြ လုပ်လို့ ရအောင် Website တစ်ခုနဲ့ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ ရပ် တစ်ခု ကို အသုံးပြုနေတဲ့ “နည်းပညာသည် (သူကြီးမင်း)” ဖက် က ဘက်လိုက်ပြောရရင်ဖြင့် …..
အဲဒီ သူကြီးမင်း ရဲ့ တစ်ချို့ စမ်းနေတာတွေက ရွာ့ဥပဒေစည်းကမ်း ကို ရှုံ့ချီ နှပ်ချီ လုပ်ဖို့ ထက် အများ ပိုပြီးကောင်းအောင် သုံးနိုင်ဖို့ နည်းပညာ အတွက် လို့ စမ်းသပ်နေတာလို့ ထင်မိတဲ့ အထင်လေးကို ဝင်ရွှီး လိုက် ရ ပါကြောင်း။
အရီးလတ် အလျှောက်ကောင်းလို့ သဂျီး အထောင်းသက်သာစေ။
ရွာပြင်မှာ နွားကျောင်းပြီးပြန်အလာ ရွာထိပ်ရောက်မှ သိရတာပါတော်
ငါ ကြားဖူးတာ …
ပိန်းနှဲသီး သရဲဘဲ ချိဒယ် …
ခုမှ .. ဖရဲသီး သရဲ နဲ့ လာတွေ့နေရဒယ် …
မသိရင် မှတ်ထား တောင်မရဲ့ … ဒီဒဒင်းဘဲဟဲ့ …
ကိုင်း .. ဒါဘဲ … နင့်မို့ ချစ်နွန်နွန်းလို့ ပေါဒါ …
မြေကြီး လက်နဲ့ခတ်လို့လွဲချင်လွဲမယ် ………